Ngaba ooLadybugs bazisa ithamsanqa? - Iifeng Shui Tips
Ngaba ooLadybugs bazisa ithamsanqa?
I-ladybug ibiluphawu lwethamsanqa lwexesha elide kwihlabathi laseNtshona. Akumangalisi ukuba le nambuzane iluncedo ifumane indlela yayo kwinkcubeko yaseNtshona UFeng Shui Kunye nenenekazi ngethamsanqa. I-ladybugs yinyani inambuzane yaseNyakatho Melika kwaye ayizalelwanga e-China, yinto yokuqala yokunikezela ukuba esi sinambuzane asilophawu lwesiTshayina feng shui. ICandelo loMnqwazi oMnyama Nangona kunjalo, idibanise i-ladybugs enethamsanqa kwiimpawu zayo.
Lo ngumzekelo omhle wokudibanisa kunye nokulungelelaniswa kwenkcubeko eyahlukileyo. Ukufundiswa kwi-feng shui iisimboli zethamsanqa mhlawumbi bekungenakuphepheka kuba ama-ladybugs kudala eyimbonakalo yaseMelika yethamsanqa.
15 Imizobo yeNtlanzi yeNtlanzi yeKoi
Akukho maxwebhu abonisa xa ibali le-ladybug elizisa ithamsanqa livela okanye kutheni le nto iluphawu lwethamsanqa. Njengazo zonke iintsomi okanye iintsomi, unokufumana ikernel yenyaniso efihliweyo ebalini kwaye le ayifani.
iziselo ezidumileyo uku-odola kwi-bar
I-Lady Bugs Yizinambuzane eziNcedo
Omnye umthombo onokubakho wale nkolelo unokuvela kubalimi. Indima ebalulekileyo edlalwa ngooqongqothwane ekugcineni igadi esempilweni ngokuqinisekileyo iphakamisa imeko yabo kwindalo yendalo. I-ladybug yirhamncwa elonakalisayoizinambuzane ezinjengeentwalaezinokuhlasela iintyatyambo, ngakumbi izityalo zemifuno. Olu tyekelo lwendalo njenge rhamncwaizitshabalalisi zegadiiphakamise i-ladybug kwindima yenqanaba le-Inambuzane eluncedo kuso nasiphi na isitiya.
Ukuthandana kwama-ladybugs akuyekanga ngokuwasebenzisa njengendlela yokulima igadi yokulawula izinambuzane. Iimpawu zezinambuzane ezibomvu ezinamachaphaza amnyama amnyama zingene kwindawo yentengiso ebandakanya nefashoni. Izityalo ezisempilweni ngenxa yesikhuseli sika ladybug ekugqibeleni ziguqulelwe kwiimpawu zempilo kunye nokuchuma.
Ngaba i-Orange Ladybugs ilungile?
Kuqhelekile ukuba abantu baphazame i-Asia Beetle ngenxa ye-ladybug kuba nayo, isusela kobomvu ukuya ku-orenji okhanyayo kwaye inamabala amnyama amnyama. Ooqongqothwane baseAsia baziwa njengesitshabalalisi sendlu ngelixa kuluncedo kwizitiya ezifana nomzala wabo waseMelika.
Iindwendwe zeNdlu ezingafunekiyo zilingana ne-Chi
Kungenxa yokuba i-ladybug yinkcubeko yeNtshona feng shui isimboli senhlanhla, oko akuthethi ukuba ufuna ukuyivumela okanyeIbhungane laseAsiaUhlaselo lokuhlala ekhayeni lakho. Abanye abantu ngempazamo bakholelwa kwelokuba inani elikhulu looqongqothwane liya kubazisela ithamsanqa eligqithisileyo. Oku kudityaniswa kwezinambuzane kuthathwa njenge-clutter. Ukuba wakha wahlaselwa ngolu hlobo, uyazi ukuba inkulu kakhulu kwaye ibonakala ngathi ayinakuphela. Kuya kufuneka ubeke imigibe eyenzelwe ngokukodwa ooqongqothwane baseAsia kwaye uyisuse ekhayeni lakho.
Kubalulekile ukuba ufumanise ukuba izinambuzane zikufumana njani ukungena ekhayeni lakho kwaye uthathe amanyathelo okutywina naziphi na iindawo zokungena. Imigaqo ye-Feng shui icacile malunga nokugqithisa nangaluphi na uhlobo nokuba yinto yendalo njengamanzi, umlilo, isinyithi, umhlaba, umlilo okanye izinambuzane ezingafunekiyo. Nantoni na engena kwindawo yakho ithathwa njenge-clutter. Ukuvumela izinambuzane ezitshabalalisayo ukuthatha indawo yokuhlala kuya kuphazamisa amandla e-chi ekhayeni lakho. Yinto efanayo nothuli oluqokelelweyo, amaphepha afakiweyo, iidrowa ezixineneyo, izitya ezimdaka esinkini kunye nalo naliphi na inani lezinye izinto zokugcwala.
Sebenzisa i-Ladybugs njengeMpawu zeThamsanqa elungileyo
Ezinye iindlela onokufaka ngazo i-ladybugs kuyilo lwakho lwe-feng shui kubandakanya ukongeza isimboli kwicandelo elithile lekhaya lakho. Khumbula, uphawu lwe-ladybug yenye yokukhusela imifuno kwingozi. Cinga olu phawu xa usenza isigqibo sokuba ulubeka phi uphawu lwe-ladybug. Mhlawumbi ufuna ukhuseleko olongezelelekileyo kwicandelo lakho lobutyebi, okanye mhlawumbi ungathanda ukubeka i-ladybug yomfuziselo kwicandelo lakho lezempilo.
Ukukhetha okuhle kweempawu
Ihlala ilungile xa usongeza nayiphi na into ye-feng shui yokuqinisekisa ukuba yeyakho kwaye iyavakala ukuyibeka ekhayeni lakho. Ukuba ikhaya lakho lisisitayile esisesikweni, awufuni ukuphosa nje umqamelo we-ladybug kwi-settee yakho kaLouis IV. Oku akuyi kujonga nje endaweni, kodwa kuya kuba nefuthe elichaseneyo.
Imigaqo ye-Feng shui inyanzelisa ukuba zonke izinto ekhayeni lakho zisebenze kunye ngemvisiswano ukwenza ibhalansi kunye nokugcina ngubani amandla ukuhamba. Olu hlobo lokongeza kwi-décor luya kunamathela njengesithupha esibuhlungu kwaye lunokuchaphazela ukuhambelana kunye nokulingana koyilo lwakho lwe-feng shui. Olu hlobo olusemthethweni lokuhombisa, unokukhetha ubhedu oluncinci okanye i-cloisonné ladybug ukubeka esiphelweni okanye kwitafile yekofu. Kubalulekile ukucinga ngenkqubo yoyilo ngaphambi kokuba ungeze nayiphi na uyilo lwe-feng shui okanye izinto.
Kukho iinkolelo ezininzi xa kuziwa kwi-ladybugs. Zonke zibonakala ngathi ziphuma kwimpembelelo entle yolawulo lwenambuzane egadini.
igazi kwisitulo sepuppy kodwa usebenze ngendlela eqhelekileyo
Ngaba Lithamsanqa Elibi Ukubulala iLadybug?
Ngokwenkolelo, ukuba ubulala i-ladybug, uya kuba nelishwa. Le nkolelo inokuba ivele kwinto yokuba amafama axhomekeke kwizinambuzane ukunceda ukugcina i-aphid kunye nezinye izinambuzane ezinambuzane. Le ayisiyomgaqo we-feng shui, nangona kunjalo.
Intsingiselo yamaLadybugs efika kuwe
Usenokuba uvile ukuba inenekazi lihlala kuwe kwaye ungamgxothi umvumele ukuba abhabhe yedwa, uya kuba nethamsanqa. Le yinkolelo kwaye ayihambelani nayo nayiphi na inyaniso ye-feng shui. Enye inkolelo kukuba i-ladybug ifike kuwe, into enhle iya kwenzeka kuwe.
Ngakumbi iLuckbug Luck
Ezinye iinkolelo zibandakanya:
Ukuba ubona i-ladybug, uya kuba nenhlanhla.
Ukuba iladybug iwela entweni efana nemoto, ifanitshala, isixhobo, indlu okanye enye into, uya kuthi kungekudala ufumane imodeli entsha nephucukileyo yento leyo.
Sebenzisa iiLadybugs kwizicelo zeFeng Shui
Kulula ukongeza isimboli ye-ladybug kuyilo lwakho lwegumbi le-feng shui ukubonisa inkolelo yokuba i-ladybugs izisa ithamsanqa. Gcina ukhumbula naluphi na uphawu olongezayo kuyilo lwakho lwe-feng shui kufuneka lubukeke njengesixhobo sendalo. Musa ukuya ngaphaya kwegumbi elinamagumbi ezinto ze-ladybug. Uninzi lwayo nayiphi na into ludala ukungalingani kwaye yoyise injongo yokongeza into.
Uhambo Ship Uqeshiso Baby Care I-Ski Areas Iimidlalo Yevidiyo Umtshato Izipho
Amagqabi egadiya ajika abe tyheli namabala amdaka
Iimuvi zentsapho ezilungileyo ze-90s
Ungasusa njani ukunamathela kumthi
ukuba ubhale ntoni kwileta yothando
ukubhaka njani ifayilet mignon ehovini